TOP 300 Quotes Waxaa qoray qorayaasha aan la aqoon 2020 - Quotes Pedia
362 xigasho iyo odhaah
Waqtiyada qaarkood, waxaan u muuqanaa inaan hooseyno inaan aqbalno guul darrooyinka inta badan intaan runtii ku guuldaraysan. Xaaladda noocaas ah, waxaa muhiim ah in aan nafteenna ha dhiirrigelin iskuna day inaad ka adkaato dhibaatooyinka oo dhan adigoo adeegsanaya himilooyinkeena oo dhan.
Nolosha noloshu waa wax aan macquul aheyn. Waxay ku saabsan tahay cabsida ku dhex qarsoon gudaha dhexdeeda. Waqti xaadirkan aan bilowno inaan nafteena rumeysanno oo aan aaminsanaato kartideena, waxaan hubnaa inaan wax qabano oo aan sii wadno guuleysiga.
Noloshu waligeed sariir roomaan ah waqtiyada adagna waa hubaal inay ka talaabeen wadooyinkeenna, laakiin waxay ina wada saaran tahay sida aan u qaadno duruufahaas oo aan isku dayno inaan ka adkaano.
Waa inaanan aqbalin fashil fursad kasta. Taas bedelkeeda waa inaan ilaalinaa awooddeena oo aynaan waligeen ka xishoonin isku dayga waqtiga soo socda xitaa haddii aan ku guul darreystay isku daygii ugu dambeeyay.
Guul darrooyinka ayaa noo yimaada waqtiga aan joojinayno isku dayga. Waqtiga illaa iyo markii aan ka soo baxno ficiladeena, waxaan sii wadnaa barashada markasta oo aan ku guuldareysto, laakiin daqiiqada aan diidno inaan istaagno, waa guuldarrooyinka dhabta ah ee aan la kulanno.
Xaaladaha noocaas ah, ereyada kaliya ee dhiirrigelinta naga celin kara waxay ka yimaadaan dhowr Qorayaasha aan la aqoon oo naga caawiya xaqiijinta nuxurka dhabta ah ee tijaabada.
Qaar kale Xigashooyinka aan la aqoon wuxuu noo sheegayaa inay tahay inaan had iyo jeer isku cadaadinno wax qabad oo isku dayno inaan gaarno himilooyinka aan nafteenna u dejinnay. Waa muhiim in la fahmo in riyooyinkeennii oo dhami ay hubaan inay waxtarla'aan noqonayaan haddii aannaan ka soo bixin inaan baxno oo isku dayno inaan gaarno.
Cidna waxba kuu qaban mayso. Markaa, maahan cid kale oo aan ahayn adiga gaarista yoolalkaaga. Sidoo kale, waa inaad si dhakhso leh u dhaqan gelisaa.
Ma jiro wax la yiraahdo 'dambe' maxaa yeelay badanaa wuxuu noqdaa 'weligiis'. Haddii aad heshay shaqo kasta oo aad ku degto, waa inaad hadda bilawdaa hawsha, maadaama aysan jirin berri wax laga qaban karo.
Baro in uusan jiri karin macallin ka weyn nolosha lafteeda. Waa inaadan waligaa joojin waxbarashada maadama noloshu had iyo jeer gelineyso nidaamka hanti dhawrka, adigana adiga ayay ku xiran tahay sidaad u qaadaneyso casharadaas.
Sidookale, waa inaad barataa inaad diirada saarto hadafyadaada halka carqalada ka imaan laheyd wadadaada. Hadaad usii jeediso caqabadaha, waxaad hubtaa inaad ka leexiso halka aad diirada saareyso.
Sidaa darteed, sii wad eegista hadafka aad naftaada u dhigtay, iyo Guusha ayaa ku xidhan inay kugu soo socoto!
Rumeyso inaysan nolosha waxba ka suurtoobin. Haa, dadka maanta guusha gaadhay waxay gaadhay ilaa…
Kaliya waad fashilmaysaa markaad joojiso isku dayga. - Lama yaqaan
Mararka qaarkood, waxaan nafteenna u tixgalinaa sidii kuwo guuldaraystay oo aan bilaabin fikirka sidii aan ugu fiicnayn…
Naftaada riix, maxaa yeelay qof kale oo adiga kuu samayn maayo. - Lama yaqaan
Waan ognahay in isku xirnaanta shucuur ahaan ay tahay wax qurux badan. Waxba kama fiicnaadaan in lala xiriiro qof…
Mararka qaar goor dambe ayaa noqda weligiis. Samee hadda. - Lama yaqaan
Waqtiga intiisa badan, waxaan u qaadaneynaa waqti badan. Oo sababtaas awgeed, waxaan…
Furaha guusha waa in diirada la saaraa yoolalka, ee ma aha carqalada. - Lama yaqaan
Mararka qaar, marka aan iskudayo inaan gaarno himilooyinkeena, waa inaan soo maro arimo badan. Iyo…
Farxadu waa wadnaha, ma aha duruufaha. - Lama yaqaan
Dadka badankood badanaa waxay dareemaan in kuwa kale ay ka farxad badan yihiin sida ay yihiin. Markasta oo ay ku duubaan warbaahinta bulshada…
Ha u ogolaan waxyaalaha nacasnimada ah inay jebiyaan farxaddaada. - Lama yaqaan
Nolosha, wax walba looma maleynaayo inay u dhaqaaqaan sida aad rabto. Waxyaabo gaar ah ayaa jiri doona…
Waligaa ha dejin wax ka yar intaad u qalanto. - Lama yaqaan
Ka hadal shaqada ama xiriirka, waa inaadan weligaa degin wax kasta oo ka qiimo yar wixii aad…
U wanaag dadka sabab la'aan. - Lama yaqaan
U roonow dadka wax aan sabab ahayn, maxaa yeelay taasi waa waxa aad u muujiso aqoonsi ahaan. Waa inaad had iyo jeer…
Ha lumin rajo. Weligaa ma ogid waxa berri dhici doona. - Lama yaqaan
Weligaa ha lumin rajada aad waligaa u ogtahay waxa berri kugu soo dhacay sanduuqa. Haddii wax…
Naftaada u caddee, dadka kale ma aha. - Lama yaqaan
Waxyaabaha waa weyn waligood kama yimaadaan aagagga raaxada. - Lama yaqaan
Waxaan ognahay in raaxada ay tahay mid kamid ah qeybaha ugu muhiimsan nolosheena. Hadaadan ahayn…
Faraxow, maahan inaad wax walba u fiican yihiin, laakiin maxaa yeelay waxaad ku arki kartaa waxa ugu wanaagsan wax walba. - Lama yaqaan
Ku qanac fikirka ah inaad wax fiican ka qaban karto hareerahaaga. Waxay ku saabsan tahay…
Way adkaan doontaa, laakiin adkaanta macnaheedu maahan wax aan macquul ahayn. - Lama yaqaan
Hagaag, kulligeen waxaan ku nool nahay hal-ku-dhag nololeedkeenna. Kulligeen waxaan ku riyooneynaa riyooyin kala duwan…
Saaxiibbada saxda ahi waa saaxiibbada nolosha. - Lama yaqaan
Asxaabta. Hadiyadda ugu weyn ee uu bini-aadamku yeelan karo noloshiisa ama nolosheeda. Awoodda lahaanshaha…
Jacayl run ah lama helin. Waa La Dhisay. - Lama yaqaan
Waa muhiim in la fahmo in jaceyl dhab ah aan la helin. Waa wax aad u baahan tahay inaad dhisto…
Jacaylku uma baahna inuu kaamil noqdo. Kaliya waxay u baahan tahay inay run noqoto. - Lama yaqaan
Jacaylku uma baahna inuu noqdo mid qumman; kaliya waxay ubaahantahay inay run noqoto. Haa, taasi si sax ah baa loo yiri…
Naftaada ku xir dadka wanaagsan. - Lama yaqaan
Waa muhiim inaad naftaada ku hareereysid dad wanaagsan maxaa yeelay taasi waxay aakhirka kaa caawin doontaa inaad ka fikirto wanaag.
Fikirka togan ma iska indhatirayo dhibaatooyinkaaga. Waxay leedahay kalsooni awoodaada aad kula macaamili karto. - Lama yaqaan
Riyood. Rumayso. Dhis. - Lama yaqaan
Bini aadam ahaan, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad qirato waa in riyadaadu aan lagu koobnayn…